DSLR Camera တွေထက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Mirrorless ကင်မရာတွေမှာပေါ့ပါးခြင်း၊ နယ်ပယ်အစုံမှာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ DSLR Camera တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ သေးငယ်ခြင်း၊ DSLR Camera များကဲ့သို့ Sensor Size ကြီးမားသော်လည်း Point & Shoot Camera များလို သေးငယ်ပေါ့ပါးခြင်း၊ DSLR Camera ကဲ့သို့ မိမိအလိုရှိတဲ့ ပုံရိပ်ဖမ်းမှန်ဘီးလူး Range အစုံ လဲလှယ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းစတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် လူကြိုက်များလာပါတယ်။
၂၀၀၄ ကတည်းက ပထမဦးဆုံးသော Mirrorless နည်းပညာသုံး ကင်မရာကတော့ EPSON R-D1 ကင်မရာဖြစ်ပြီး သူ့နောက်မှာ Leica ကနေပြီး Leica M8 ဆိုပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ Panasonic Lumix DMC-G1 ဆိုပြီး စက်တင်ဘာလထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စရောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Sensor Size Full Frame တွေ မဟုတ်သေးပါဘူး။
ပထမဦးဆုံးသော Full Frame Mirrorless Camera ကို Leica ကနေပြီး M9 ဆိုပြီးတော့ ၂၀၀၉ မှာ စထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုနီအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ Full Frame Mirrorless Camera ဖြစ်တဲ့ Alpha7ကိုတော့ ၂၀၁၃ မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အောက်ပါဖော်ပြပါ ကင်မရာတွေကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Mirrorless Camera ဖြစ်ပြီး Level အစုံအလင်က ကင်မရာငါးမျိုးကို မူရင်းရေးသားသူတွေက ဖော်ညွှန်းပေးထားပါတယ်။ အဲဒီကင်မရာငါးမျိုးကလည်း အများစုက ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှာ ၀ယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Fujifilm T4 (ဘက်စုံကောင်းတဲ့ ကင်မရာ)
ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ နည်းပညာတွေကြောင့်ပါ။
အကောင်းကြိုက် ဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ ရှေးဟောင်း 35mm ကင်မရာတွေကို ပြန်တမ်းတလိုသူတွေ၊ ကင်မရာ Level မခွဲ ခြားဘဲ ကင်မရာဝယ်ယူ ကိုင်ဆောင်ချင်သူတွေ အဝယ်သင့်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Fujifilm T4 ကို ရွေးချယ်တာလဲ?
ကြီးမားတဲ့ Sensor Size နဲ့ Megapixel မပါပေမယ့်ဓာတ်ပုံ အတွေ့အကြုံနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မယှဉ်နိုင်လို့ဆိုပါတယ်။ ရှေး 35mm ဖလင်ခေတ်ကင်မရာ ခေတ်ကအရသာမျိုး ပြန်လည်တမ်းတသွားစေမယ့် control dials တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသလို 5-axis sensor-shift stabilization နဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ မော်နီတာတွေ ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ X-T4 အနေနဲ့ အတိတ်ကာလ X-T Series ကင်မရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားမှု လုံးဝနီးပါးကို ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းလည်း နှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက် လာပါတယ်။ Megapixel 26.1MP ပုံတွေကို ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးမှုအတွက် FPS 15 အ ထိ စွမ်းဆောင်မှုရရှိလာသလိုဗီဒီ ယိုပိုင်းမှာလည်း Full HD အနေအထားနဲ့ ရိုက်ကူးရင် 240fps အထိ ရိုက်လို့ရတဲ့အတွက် အနှေးပြချက်တွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါတယ်။
Sony A7R IV(အကောင်းဆုံး Full Frame Mirrorless )
Full Frame Camera အမျိုးအစားထဲမှာ 61Megapixel အထိ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံကို Detail အသေး စိတ်ရရှိဖို့ စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတွေ၊ Professional Photographer တွေအဝယ်သင့်ဆုံးပါ။
ဘာကြောင့် Sony A7R IV ကို ရွေးချယ်တာလဲ?
ဒီမော်ဒယ်အနေနဲ့ 61 Megapixel လောက်ရရှိထားပြီး ဗီဒီယိုပိုင်းမှာ အရည်အသွေးတွေပို ကောင်းလာလို့ပါ။ အသေးစိတ် လက္ခဏာတွေရရှိခြင်း ၊ Cropping အဖြတ်အတောက်ခံခြင်းစတာတွေ ကောင်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Megapixel များတဲ့ ကင်မရာတွေမှာ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးမှုအတွက် FPS နည်းပါးတဲ့ သဘာဝရှိပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်မှာ 10FPS အထိ ရရှိထား ပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာအမျိုး အစားအတူ A9 နဲ့ အတူအား ကစားပုံတွေရိုက်ရင် မနိုင်နိုင်ပေ မယ့် အသုံးပြုသူတွေအတွက် တော့ များပြားတဲ့ FPS ပမာဏ ဖြစ်ပါတယ်။ 61 megapixels အနေနဲ့ တစ်နည်းနည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါက 240-megapixel image ကိုဖန်တီးဖို့ pixel shift mode ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ 4k ဗီဒီယိုအရည်အသွေး၊ ရာသီဥတုဒဏ် ပိုခံနိုင်တာတွေလည်း ရှိလာသလို Real-Time Tracking နဲ့ Real-Time Eye AF တို့ကြောင့် 5-axis stabilization ကို ကိုယ်ထည်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းထားပြီး autofocus system တွေလည်း ပိုကောင်းလာပါတယ်။
Fujifilm X-T30 ( စျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ Mirrorless)
ထူးခြားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးတွေ ကောင်းမွန်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာရဲ့စျေးနှုန်းကလဲ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဟန်းဆက်ထက်ကို စျေးနှုန်းချိုသာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေး ထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးလိုသော်လည်း ကင်မရာအတွက် ဘက်ဂျက်ကို ချွေတာလိုတဲ့ ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေ ဝယ်ယူဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Fujifilm X-T30 ကို ရွေးချယ်တာလဲ?
Sensor ကို ASP-C Sensor ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး 26.1 MP အရည်အသွေးရှိပုံတွေ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ စျေးအသက်အသာဆုံးနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ကင်မရာဖြစ်ပေမယ့် တန်ဘိုးကြီးတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းက တန်ကြေးနဲ့ တန်ဖိုးကိုခွဲ ခြားနားလည်တတ်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ။ အမျိုးအစားတူ T-3 မော်ဒယ်ကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Function တွေအရည်အသွေးတွေကို အကုန်အစင် မတုပနိုင်ပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပါတယ်။ ဒီကင်မရာမော်ဒယ်ထက် စျေးနှစ်ဆလောက်ရှိတဲ့ ကင်မရာတွေနီးပါး စွမ်းဆောင်မှု ရရှိနိုင်တဲ့ အနေအထားပါ။ X-T30 မှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ပုံတွေနဲ့ 10-bit 4K ဗီဒီယိုတွေကို ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ 26-megapixel X-Trans အာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြု ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ 425-point phase-detect autofocus system ဟာ မြန်ပြီးတိကျကာ frame တစ်ခုလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ T3 လို မိုးလေဝသဒဏ်ခံ Seal နဲ့ Dual Card Slot တွေတော့ မပါဝင်လာပါဘူး။
Panasonic Lumix GH5 ( Video ရိုက်ကူးရန်အတွက် အ ကောင်းဆုံးသော Mirrorless)
ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုအပိုင်းမှာ အားသာချက်တွေ များပြားတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
Mirrorless Camera တွေ နဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်နားယူရပ် တန့်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီကင်မရာကတော့ Memory Card နဲ့ ဘက်ထရီမကုန်မချင်း မရပ်မနား ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Mirrorless Camera တွေနဲ့ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးလိုသူတွေ အဝယ်သင့်ဆုံး ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Panasonic Lumix GH5 ကို ရွေးချယ်တာလဲ?
Mirrorless Camera အများစုက ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုအပိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်း ကလစ်တိုတွေသာ ရိုက်ကူးနိုင်ပေမယ့် ဒီမော်ဒယ်ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေတဲ့ အခါမှာ Memory Card နေရာအလွတ်သာရှိပါစေ၊ ဘက်ထရီအပြည့်သာ ဖြစ်ပါစေ။ ရိုက်ကူးမယ့်နေရာကိုသာ Tripod နဲ့ထောင်ပြီး ချိန်ထားရိုက်ထား အားမကုန်သရွေ့ ကတ်မကုန်သရွေ့ ရိုက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဗီဒီယို အရည်အသွေးမှာလည်း 4K ကို 60fps နဲ့ ပထမဦးဆုံးရိုက်နိုင်တဲ့ ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ Micro Four Third Sensor အသုံးပြုထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဗီဒီယိုကို 6K အထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရိုက်ပြီးမှ Focus Point ပြန်ရွေးချယ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်တွေ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ပရော်ဖက်ရှယ်နယ် ဗီဒီသမားတွေ အသုံးပြုဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော ဗီဒီယိုစနစ်တွေ ထောက်ပံ့ပေးထားတာပါ။
Sony A6100 (beginners တွေအတွက် အကောင်းဆုံး Mirrorless ကင်မရာ)
ကင်မရာဖွဲ့စည်းမှုတွေကို မချွေတာထားပါဘူး။ အသုံးချမှုအတွက်ကလည်း စတင်လေ့လာသူတွေအဖို့ စျေးနှုန်းပိုင်းရော ကင်မရာဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းရော ထိတွေ့ ရလွယ်ကူတဲ့ အနေအထားပါ။
Mirrorless Camera စတင်ကိုင်ဆောင် သူတွေအတွက်ရော ကင်မရာစတင်ကိုင်ဆောင်သူတွေ ၀ယ်ယူသင့်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Sony A6100 ကို ရွေးချယ်တာလဲ?
Sony ရဲ့ Full Frame Mirrorless Camera တွေက ကောင်းတာလဲမှန်ပါတယ်။ စျေးလဲကြီးမြင့်ပါတယ်။ ဒီမော်ဒယ်မှာ A7 Series ရဲ့ အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် A7 Series လို E-mount နဲ့ တူညီနေလို့ နောင်အခါ စိတ်ပါလို့ Full Frame Mirrorless အဆင့်ကို တတ်လှမ်းမယ်ဆိုရင် ဒီမှာရှိပြီးသား Lens တွေနဲ့အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်လို့ပါ။ A6100 မှာ 24-megapixel APS-C sensor ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Full Frame Mirrorless လောက် အလင်းနည်းစွမ်းဆောင်ရည် မကောင်းမွန်ပေမယ့် တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ အနေအထားပါ။ 425-point hybrid autofocus system ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် A7 မော်ဒယ်တွေလို A6100 က အချို့ကို စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆက် တိုက်ရိုက်ကူးမှုအတွက် 11 fps အထိရရှိနိုင်သလို ဗီဒီယိုအရည်အသွေးကလည်း 4K အထိ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် A6100 မော်ဒယ်က စျေးနှုန်းချို သာပြီး ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းပေါ့ ါးတဲ့ ကိုယ်ထည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။
Ref: www.digitaltrends.com, By Hillary K. Grigonis and Daven Mathies